May 2019 - Page7of9- Glamorous Icon
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:३३
Monthly Archives: १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:३३
Home›१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:३३›१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:३३ (Page 7)
बलिउड नायक बरुण धवन चलचित्रसँगै आफ्नो प्रेम जीवनका कारण पनि चर्चामा छन् । अझ पछिल्लो समय उनको बिबाहको कुराले पनि मिडियामा धेरै स्थान पाइरहेको छ । बरुणले यो वर्ष प्रेमिका नताशा दलालसँग बिबाह गर्ने समचारहरु आइरहेका छन् । तर, उनीहरुले भने यो विषयमा औपचारिक जनकारी दिएका छैनन् । केही समय अगाडि त बरुणले यो कुरालाई ...
चलचित्र ‘वीर विक्रम २’ले बक्स अफिसमा अपेक्षित कमाई गरेन । मल्टिप्लेक्समा कमजोर देखिएको चलचित्रको व्यापार सिंगलमा सुरुवाती दिनमा सुखद देखिएको थियो । चलचित्र ‘वीर विक्रम २’ रिलिज भएको एक सातापनि नायिका वर्षा सिवाकोटीले निर्देशक मिलन चाम्सको प्रशंसा गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छिन् । बजारमा दुइको प्रेम चर्चा चलेपनि दुबैले यो कुरालाई अस्विकार गरिसकेका छन् । ...
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १५:४५
नायक अनमोल केसी चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’मा काम गरेपछि अहिले मौन छन् । चलचित्रले व्यापारिक रुपमा बम्पर कारोबार गरेपछि अनमोलको स्टारडम उकासिएको छ । अनमोल केसीलाई चलचित्रको अफर आइरहेका छन् । तर, उनी अहिलेसम्म कुन चलचित्रमा काम गर्ने भन्ने दोधारमा पनि छन् । उनले, घरकै चलचित्रमा काम गर्न लागेको खबर पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् ...
यो बर्षको प्रतिक्षित चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’को छायांकन सुरु भएको जानकारी यसको निर्माणपक्षले दिएको छ । चलचित्रको छायांकन सुरु भएको जानकारी दिदै चलचित्रका निर्माता रोहित अधिकारीले राम्रो चलचित्र बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली बक्स अफिसमा चलचित्रले बम्पर कमाई गर्ने अड्कलबाजी अहिले नै लगाइएको छ । आमा सरस्वती मुभिज र रोहित अधिकारी फिल्मस्को प्रस्तुतिमा ...
In an International Excellence Award 2019 hosted at Hotel Grand Continental, Kuala Lumpur, Malaysia on 20th May 2019, Fashion Choreographer Rojin Shakya has been awarded with outstanding international choreographer award 2019. Mr. Shakya was been awarded for his long term continuous journey, contribution, dedication and achievement in the field of fashion and pageantry choreography. In ...
त्यसो त रणवीर कपूर सिंगल बस्दैनन् । उनी कसै न कसैसँग अफेयरमा हुन्छन् । लभ रोमान्स र डेटिङ त उनको जीवनको अभिन्न पाटो नै हो । सबैलाई थाहै छ, अहिले पनि उनी खाली हात छैनन् । आलिया भट्टसँग ‘इलु इलु’ चलिरहेकै छ । उनको प्रेम प्रसंग चाहि दीपिका पादुकोणसँग छँदा उत्कर्षमा पुगेको हो । दीपिकाले ...
केही समय अगाडि नेपालमा छायांकन गरिएको चलचित्र ‘इन्डियाज मस्ट वान्टेड’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । वास्तविक घटनाबाट प्रभावित भनिएको यो चलचित्रले भारतका ५ जना नपत्याएका हिरोहरुले गरेको एउटा घटनाको अप्रेशनलाई उठान गरेको छ । मुम्बइमा बम हमला गरेर नेपाल छिरेका एक आतंककारीलाई पछ्याएका ५ हिरोको कथा यो चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालका विभिन्न स्थान ...
फ्रान्सको पेरिसमा भइरहेको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्म मेकर्स मीन बहादुर भामले आफ्नो आगामी फिल्मका लागि एक नर्वेजियन पुरस्कार जितेका छन् । विश्वभरका फिल्ममेकर्सले निवेदन दिएका ५२ वटा फिल्मी परियोजनालाई उछिन्दै मीन बहादुर भामको द इयर अफ कोल्ड (चिसो वर्ष)ले नर्वेजियन सरफन्ड जितेका हुन् । जसको राशी ६६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ (६० हजार अमेरिकी डलर) ...
सो, रोदन, डर-त्राश वा रोमाञ्चकता । यी सबै मानवीय संवेदनाका पक्षहरु चलचित्रका लागि मनोरञ्जनका मसला हुन् । तर, पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अन्य पक्षहरु गौण भएर हाँसो मात्रै हावी भइरहेको छ । कमर्सियल फिल्म भन्नासाथै सबै कमेडी जनराकै पछि कुदिरहेका छन् । हँसाउनु त्यति सजिलो काम होइन, जति नेपाली फिल्मका निर्माता-निर्देशकले सोच्छन् । हामीकहाँ ...
भारतका चर्चित कमेडियन कपिल शर्माले ६ महिना अगाडि बिबाह गरेका थिए । उनले गिन्नीे चतरथसँग प्रेम बिबाह गरेका थिए । कपिलको बिबाहमा बलिउडका निकै चर्चित सेलिब्रेटीहरु शुभकामना दिन बिबाह भोजसम्म पुगेका थिए । यस्तैमा, अहिले कपिल पिता बन्न लागेको समचारहरु निकै आइरहेको छ । भारतिय मिडियालाई आधार मान्ने हो भने कपिलको श्रीमती गिन्नी गर्भवती छिन् ...